Sheeko sheeko1: Goob-Aware Goob-Aware Digital Iibsiga Mawduuca Bixinta | Martech Zone
Shaqooyinka sheekooyinka1 waxay bixisaa barxad soo bandhigid moobiil is-dhexgal ah si loogu hubeeyo kooxdaada aagga qalab si ay uga caawiso kor u qaadida kalsoonida, isku waafajiso istiraatiijiyadda suuq geynta iibka, iyo kobcinta xiriirada ganacsi ee leh fikradaha waqtiga dhabta ah iyo xogta waxqabadka leh.
Sheeko sheeko1 cusub Fursadaha Fursadaha waxay siisaa shaqaalaha iibka goobta awood u leh inay iskula wadaagaan goobta ay hadda ku sugan yihiin CRM iyagoo adeegsanaya qalabka moobiilka si ay ugu sawiraan rajada dhow iyo goobaha macmiilka iyo astaamaha. Goobta Fursaddu waxay habeysaa macluumaadka iyadoo lagu saleynayo aagga isticmaaleha hadda, waxay mudnaanta siineysaa fursadaha ballanta waxayna ka heleysaa macluumaadka xiriirka hadda ee raadinta ereyada fudud. Iyada oo la adeegsanayo Fursadaha Fursadaha, dadka wax iibiya waxay sidoo kale macluumaadka uga soo diri karaan wicitaanada iyo shirarka shirkadda CRM.
Markaad hawl gasho, Fursadaha Tilmaamuhu wuxuu ku shaqeeyaa isagoo la jaan qaadaya iibiyaha meesha uu hadda ku sugan yahay isagoo adeegsanaya aaladda mobilka. Macluumaadka ayaa markaa laga soo saaraa shirkadda CRM qalabka iyadoo lagu saleynayo xogta juqraafi iyo qaababka baaritaanka. Macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan macmiilka ugu dhow iyo xafiisyada rajada oo ay ku jiraan mudnaanta fursadaha ayaa markaa la heli karaa iyada oo loo marayo raadinta ereyada fudud iyo / ama magacyada dambe. Wicitaanada iyo shirarka waxaa lagu qori karaa CRM iyada oo loo sii marinayo Fursadaha Fursadaha, iyadoo laga takhalusayo safarka xafiiska.
Waa muhiim in dadka wax iibiya ay kordhiyaan waqtiga ay ku jiraan si ay u gaaraan wax soo saarka ugu sareeya ee suurtogalka ah. Fursadaha Fursaduhu waa mid ka mid ah aaladaha ugu horreeya ee lagu qaato awoodda CRM loona tarjumo wax ku oolnimada iibka. Awoodda helitaanka macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan macaamiisha iyo macaamiisha suurtagalka ah ee ku sugan aag juquraafi ahaaneed oo la beegsanayo waxay u oggolaaneysaa dadka wax iibiya inay ku daraan shirar badan, yareeyaan waqtiga taleefanka iyo emaylka, iyo inay ka fogaadaan safarada aan loo baahnayn ee dib ugu laabta xafiiska si loo helo CRM. Tani waxay keeneysaa faa'iido aan caadi aheyn marka loo eego waxtarka dadka wax iibiya, waxayna si weyn hoos ugu dhigtay qiimaha fursadaha shirkadda. Jeff Fritz, Maamulaha shirkada Storyworks1
Tilmaamaha Shaqooyinka Sheekooyinka1
Helitaanka macluumaadka qad la'aanta - marin u helka waxyaabaha aad uga baahan tahay xiriir la’aan ama xiriir la’aan, waxyaabaha ku jira waxaa lagu waafajinayaa qalabkaaga si loogu helo marin la’aan.
Isdhexgalka ayaa diyaar ah - ku xirnaato tikniyoolajiyadaha ganacsi ee aad adigu maanta isticmaasho sida Salesforce, Netsuite, Dropbox, Oracle, Blackboard iyo wixii intaa ka badan. Madalkeenna ayaa sugaya.
Joogtaynta berrinka - iibintu had iyo jeer waxay lahaan doonaan agabyada ugu casrisan ee desktop desktop, laptop, tablet, ama casriga ah.
Hal meel oo ah qalabkaaga iibka - habeysan, u taga isha dhammaan qalabkaaga iibka. Ku soo dhawaaw si aad u fududeyso habka iibkaaga.
Ku darista gaarka ah - kudarro is-dhexgal ah oo ka caawiya muujinta qiimaha. Keen khibrad iibsasho mudan in la xasuusto.
Tiknoolajiyada iibka ee si fudud loo isticmaalo - barxadda waxaa loo qaabeeyey salka laga soo bilaabo si loo taageero shirkadda wax iibisa.
Tags: Sabuuradwaxyaabaha iibka dhijitaalka ahsanduuqa hoos loo dhigonetsuiteOraclewaxyaabaha iibka ahmaaraynta waxyaabaha iibka ahiibinta waxyaabaha dhijitaalka ahiibinshaqooyinka sheekooyinkashaqooyinka sheekooyinka ee baahida loo qaboshaqooyinka sheekooyinka1
7 Siyaabood oo Suuqgeynta Warbaahinta Bulshadu ay Caawiso Ganacsiyada
RivalIQ: Tartamayaasha Warbaahinta Bulshada iyo SEO Analytics